Fanadihadian’ny OIT: anisan’ny ratsy karama indrindra ny eto Madagasikara | NewsMada
Anisan’ny firenena ratsy karama indrindra aty Afrika i Madagasikara, araka ny fanadihadiana nataon’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT). Tsy misy fiovana izany hatramin’ny 2004, fampiharana ny Ariary, ka hatramin’izao. Ambany indrindra ny karama amina sehatra tsy miankina. Tamin’ny 2019, salanisa amin’ny ankapobeny, 168 000 Ar isam-bolana, sokajin’asa farany ambany M1-1A ; 340 000 Ar sokajy OP3 – M5. Samy ivelan’ny sehatry ny fambolena avokoa ireo.
Any amin’ny fambolena, ivelan’ny rafitra ara-dalàna, ny maro anisa sy kely ambany indrindra, sahanin’ny isam-pianakaviana. Isan-taona, fiakaran’ny vokatra, ny andraisam-bola izay miankina amin’ny karazam-bokatra: vary, lavanila, legioma, sns. Misy tsy manana fidiram-bola afa-tsy 170 000 Ar isan-taona.
Betsaka ny miasa tena ivelan’ny ara-dalàna
Ny karama no singa iray andrefesana ny fari-piainan’ny Malagasy sy ny toekarem-pirenena. Singa iray hidiran’ny mpampiasa vola avy any ivelany sy eto an-toerana. Hita fa any amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ny fampiasam-bola be indrindra, antapitrisany dolara na amina miliara dolara, toy ny ataon’ny orinasa Ambatovy sy ny QMM. Io karama ambany io ny mahabetsaka ny miasa tena ivelan’ny ara-dalàna. Ankoatra ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono, hita izany amin’ny fahamaroan’ny mpivarotra.
Na izany aza, mahazo tohana avy amin’ny (OIT) ny sehatra maro eto Madagasikara: politika famoronana asa, fanohanana ny sehatra tsy miankina ho fampandrosoana ny toekarena eto an-toerana, fananganana orinasa madinika, ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Mbola tsy takona afenina anefa ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny asa, toy ny tsy fiantohana ara-pahasalamana, tsy fisoratana any amin’ny Cnaps.